5 Calaamadood Oo Muujinaya Marka Xiriirka Lamaanaha Uu Yahay Mid Aanan Mustaqbal Lahayn - Aayaha
Xiriirkaaga haduu leeyahay calaamadaha hoos ku xusan, dabadeed xiriirkiina mustaqbal malahan.
Kuuma muuqdo mustaqbla aad wadaagtaan
Haddii mustaqbalka kaala dhexeeya lamaankaaga/lamaantaada aad u aragto mid aanan mustaqbal lahayn, dabadeed ma jirto sabab uu xiriirkaas kusii jiro maxaa yeelay mustaqbla maba lahan.
Xiriirkiina mustaqbal malahan haddii adiga iyo lamaantaada aadan isku kalsooneyn, kalsoonida waa waxa ugu muhiimsan oo uu leeyahay xiriir kasta oo mustaqbal leh.
Lamaantaada/Lamaankaaga dadaal ma galiyo
Xiriirka waxa uu ubaahanyahay waqti iyo dadaal, haddii lamaankaaga/lamaantaad aysan dadaal ku bixin sidii uu xiriirka u shaqeyn lahaa, dabadeed xriirkaas mustaqbal malahan. Haddii lamaankaaga/lamaantaada aysan daneyn xiriirka, xiriirkaas mustaqbal malahan.
Iskuma qaadataan cilladihiina
Xiriirka mustaqbalka leh, waa in lamaankaaga/lamaantaada aad ku qaadataa shaqsiyaddiisa iyo sida uu yahay ama ay tahay. Haddii ay jiraan wax uu lamaankaaga/lamaantaada ay aad u necebtahay oo adiga kugu saabsan isla markaana aadan ugu dulqaadan Karin, xiriirkaas mustaqbal malahan.
Lamaankaaga kaama haqab tirin baahiyahaaga aasaasiga ah
Baahiyaheena aasaasiga ah ee xiriirka waa in lamaanteena ayna jeclaato isla markaana na taageerto. Waxaan rabnaa lamaan waqti aan isla qaadano sameysa dhib malahan mashquulkeeda ama mashquulkiisa. Haddii lamaantaada/lamaankaaga uusan la kulmi Karin baahiyahaaga aasaasiga ah dabadeed xiriirkaas mustaqbal malahan.